Vaovao - satroka siny 30 tsara indrindra ho an'ny fomba, vanim-potoana ary teti-bola rehetra amin'ny 2021
Satroka siny 30 tsara indrindra ho an'ny fomba, fizaran-taona ary teti-bola rehetra amin'ny taona 2021
Ny fahasalaman'ny vehivavy dia mety hahazo komisiona amin'ny alàlan'ity rohy eto amin'ity pejy ity, saingy ny vokatra inoantsika ihany no asehonay. Maninona no matoky anay?
Raha resaka lamaody no resahina, dia tonga toy ny rivotra ny satroka siny. Hatramin'ny satroka siny malaza an'ny Britney Spears tamin'ny taona 90 ka mety kokoa ho fanomezana gimmick tany am-piandohan'ny taona 2000, ary eo amin'ny làlambe (sy TikTok iray manontolo), ny satroka siny dia tsy lamaody fotsiny fa mahafinaritra koa ny mitafy—— tena azo ampiharina ihany koa. Na mitady fomba mahafatifaty hiarovan-tena amin'ny masoandro eny amoron-dranomasina ianao, na te hanana fitaovana mahafinaritra fotsiny mba hampisy fahalianana amin'ny pataloha jeans sy T-shirt manaraka, dia misy safidy ho an'ny style Bucket cap rehetra (nalaina avy tamin'ny olona mandra-pahatongan'ny iray volana lasa izay, tena nanohitra fatratra ny siny siny izy).
Raha mitady endrika mahazatra sy Retro ianao dia afaka misafidy satroka fanaovana voaroy intarsia, izay mangataka ampiarahina amin'ny picnics sy sundresses. Na mety te-hanao zavatra somary zoro ianao rehefa mivoaka amin'ny alina-dia mila mijery ilay satroka siny ianao. Tsy mahazo fironana vy firy? Ity satroka mpanjono volamena ity dia mikiakiaka amin'ny anaranao. Misy satroka siny mandoko hamandoana aza natao manokana ho an'ireo mpihazakazaka lavitra (tena mety amin'ny andro tora-pasika manemboka ihany!) Sy satroka siny volom-borona vita amin'ny volon-koditra vita amin'ny mpankafy satroka siny amin'ny vanim-potoana rehetra.
Satroka siny no lamaody farany tsy maintsy ananana. Na dia azonao atao aza ny mampiasa vola amin'ny entana lafo vidy, ny ampahany tsara indrindra dia ny ambany $ 20 ny ankamaroan'izy ireo, izay mahatonga azy ireo ho fanampiny mahafinaritra amin'ny akanjo rehetra ao anatin'ny tetibola Ny fomba farany. Ireto ny satroka siny tsara indrindra azonao izao:
Eny, izany dia azo antoka fa hamitsiky izay mijery anao, fa raha mijery ny hatsaranao ianao, dia hitovy amin'izany aminao.
Misy loko 32 hisafidianana, aza gaga raha manana loko maromaro amin'ny kabinetra fampitaovana ianao. (Aza misalasala manomboka amin'ny sombin-javatra roa, mba hahafahanao sy ny BFF mandray selfie mifanentana mahafinaritra koa.)
Ny lolo amboradara dia manome vibe 90s matotra, fa ny endrika tsotra dia mahatonga azy ho satroka kilasika tena tsara izay azonao ampifanarahana amin'ny zavatra rehetra. Ny molony mahery sy matanjaka koa dia mety tsara amin'ny fiarovana ny masoandro.
Ny satroka siny tsotra sy mahazatra dia saika tsy maintsy ananana amin'ny fitafiana lamaody ankehitriny, fa raha mbola tsy azonao antoka raha mety aminao io fironana io dia tsy ho very na inona na inona amin'ity satroka siny 8 $ 8 ity ianao.
Miaraka amin'ny loko sy pirinty tsy miandany kilasika 12 hisafidianana, toerana tsara hanombohana (na hampivelarana) ny arsenalanao amin'ny siny.
Ity satroka siny unisex ity dia misy ketrona voajanahary ary mety tsara amin'ny fitahirizana tsy misy ahiahy. Ho fanampin'izany, vita amin'ny landihazo 100% izy, izay ahazoana aina sy fofonaina amin'ny toetr'andro mafana.
Ny tadin'ity satroka ity dia mety tsara amin'ny mahazatra “Oh, ity zavatra taloha ity? Napetrako fotsiny ity, ”jereo. Izy io aza dia ampidirina amin'ny lamba SPF 50, izay tena miaro ny lohanao amin'ny masoandro-mifanaraka tanteraka amin'ny bikini anao vaovao.
Sarotra ny manohitra ny leggings tena tadiavin'i Lululemon, ity satroka siny roa sosona malefaka ity dia misy endrika malefaka roa sosona miaraka amin'ny lafiny mangatsiatsiaka sy tsy manam-paharoa ary lafy vita pirinty mahaliana. Tahaka ny akanjo fanatanjahan-tena ataon'izy ireo, ity satroka ity dia mampiasa lamba manara-penitra efatra sy marika famoahana hatsembohana, izay mahatonga azy io ho vanin-taona mafana.
Ity satroka siny roa sosona ity dia mampiseho ny rivotra iainana any Londres ary mety tsara amin'ny fakana sary ny andro manorana miaraka amin'ny BFF.
Eny, misy satroka siny andro aman'alina. Raha te-manao satroka vita pirinty ianao fa tsy azonao antoka raha te hijery endrika feno fahasahiana ianao, ity satroka serizy roa / satroka mainty ity no safidy mety indrindra. Tsy tia serizy? Raha manana tsirony tsy miandany kokoa ianao, dia ho tsara io fatorana fotsy fotsy io.
Azonao atao ihany koa ny miahiahy ny amin'ny fironana lamaody cheetah sy ny hoditry ny bibilava tamin'ny fotoana nisehoany voalohany, fa minoa ahy fa misy pirinty ombivavy-omby hitombo eo aminao. Raha nanomboka nankafy azy ianao aorian'ny nahitanao ny endriny tamina horonantsary TikTok OOTD an-jatony, dia raha mpitia lamaody sahisahy ianao dia ho fantatrao fa tsy maintsy ananana ity.
Ity satroka vita tanana ity dia vita amin'ny volory landy 100% ary malefaka loatra ka mety te hatory ao akory ianao. Hevero ho toy ny satroka mpanarato vita tanana amin'ny nofinao izany.
Raha ny marina, ny satroka siny rehetra dia mety ho unisex, fa ity satroka malaza ity dia mampiasa loko tsy miandany sy ny sary famantarana Adidas mahazatra, na inona na inona ny fombanao, dia afaka manome endrika sporty, lamaody ary lamaody amin'ny olona izany. mahatsapa.
Somary kely izy io, ka alao antoka fa ho lehibe kokoa ianao (ary mahazoa iray hafa satria mety hangalarin'ity vadinao ity aminao izany).
Ity satroka azo ahodina ity dia maivana, mateza ary tsy tantera-drano, natao ho an'ny andro mafana indrindra any ivelany. Ny sisiny roa santimetatra dia afaka miaro ny lohanao sy ny tendanao amin'ny masoandro (fa aza hadino mihitsy ny mampiditra takelaka amin'ny masoandro!).
Ity lamba suède artifisialy ity dia tsy tena mety amin'ny dia, fa tena mahaliana sy lamaody koa. Raha mbola tsy te hanandrana loko na loko mamirapiratra ianao dia fomba tsara ity hahazoana zavatra miavaka.
Tsy takona afenina fa ny lamaody dia mety ho endrika fampitana vaovao mahery vaika. Ity satroka sombin-tsolika Cross Colors misy peta-kofehy "Power To The People" ity no ohatra tsara indrindra.
Eny, toa mahafatifaty ilay izy, fa ny tsara indrindra dia ny mividy ity satroka ity dia manohana marika iray ianao izay manampy amin'ny fananganana tsenambarotra mifototra amin'ny tanora mainty.
Asehoy ny mpiara-dia aminao sy ny reharehanao amin'ity isa manjelanjelatra ity, manomboka amin'ny matso ka hatrany amin'ny fety virtoaly anao dia azo antoka fa hahasarika ny maso (na efatra) izany. Na izany na tsy izany, ity sombin-javatra ity mangataka toerana eo amin'ny takelaka Insta anao.
Raha tsy mampiato ny fitiavanao satroka siny ny lanezy dia ilaina izany. Ny volom-bolo dia nanjary nalaza be, fa ny lokony neon no mahaliana azy (sy mahazo aina!).
Miaraka amin'ny fiakaran'ny fanatanjahantena sy fialamboly lamaody, Nike dia nanjary iray amin'ireo marika lamaody indrindra. Atambaro ny sary famantarana famantarana azy ireo miaraka amin'ny fironana satroka siny, mavokely miloko an'arivony vitsivitsy ary fehy mandoko, ary mila manana ianao.
Bonus: Manana fantsom-panafosana mangatsiaka ao anatiny izy, izay tena mety amin'ny fampihetseham-batana sy amin'ny andro fahavaratra mafana.
Tsia, ny denim dia tsy filan'ny pataloha fotsiny. Ity satroka ity dia vita amin'ny landihazo 100%, noho izany dia miaina tanteraka izy io, ary ny endrika tonta dia manampy fahatsapana mahafinaritra sy ambany.
Raha efa manana akanjo ba vita amin'ny fatorana vita amin'ny kofehy ianao, ny leggings ary ny spaoro dia izao no ilainao mba hahavitana ny bika aman'endrinao. Na dia indraindray aza, sarotra ny mifanaraka amin'ny akanjo ny pirinty, ny loko tsy miandany an'ity vokatra tokana ity dia mahatonga azy io ho maro toy ny satroka siny fotsy fotsy na mainty.
Eny ary, ka tsy satroka siny marina izany, fa ny Hairbrella be mpividy indrindra ao Amazon dia mendrika toerana amin'ny lisitr'ireo satroka rehetra. Ny satroka mitafy satin vita amin'ny satin dia natao manokana hiarovana ny volonao amin'ny hamandoana sy ny orana, ka tsy hanimba ny volonao intsony ny toetr'andro.
Ny hoditra hatrany an-doha ka hatrany amin'ny tongotra dia hevitra tsara foana, ary azo atao izany izao. Ny famolavolana malefaka sy ny molony ambany ihany koa dia mahatonga azy ho miaina.
Na te hampirehareha ny taovolonao feno ianao na mitady ny satroka sifotra fofonaina indrindra, dia satroka tsara tarehy ity satrokely feno felana voninkazo ity. Ity dia fomba tsara hanampiana fomba maivana (ara-bakiteny) amin'ny fitafianao nefa tsy mampihena ny enta-mavesatrao.
Eny, ny satroka siny dia manodidina ny taona 90 tany ho any, fa raha te-hamerina azy amin'ny endrika Retro kokoa ianao, dia mety ho lamaody ity satroka siny feno voninkazo ity ary ho an'ny doro tanety amoron-dranomasina manaraka anao.
Ity satroka siny ity dia voaravaka ary manana endrika malefaka. Toa izany no hotafin'i Daphne Bridgerton rehefa mampiaraka ao amin'ny valan-javaboary, nefa miaraka amin'ny pataloha jeans voaravaka, wedges ary T-shirt. Toy ny tsara ihany amin'ny brunch mahamamo.
Ity modely ity dia natao ihany koa amin'ny kofehy metaly miafina tafiditra ao anaty lamba mba hisehoana mamirapiratra sy mamirapiratra.
Eny, somary lafo ity iray ity. Fa raha mitady vokatra afaka mamorona endrika mahafinaritra amin'ny alina ianao, 365 andro isan-taona, dia io no izy. Eo anelanelan'ny rivets sy ny lamba vita amin'ny hoditra vita amin'ny volomparasy, dia hampisy famirapiratana ho an'ny akanjo rehetra izany.
Raha tianao ny satroka sun floppy avo lenta, saingy mankahala ny fahatsapany henjana (ary sarotra tokoa ny manangona vakansy!), Ity satroka satroka volomaso sy satroka sifotra ity no valin'ny vavaka fitsangatsangananao eny amoron-dranomasina.
Manana sisiny malalaka kokoa izy io, mahatonga azy io ho toy ny elo amoron-dranomasina amin'ny dia lavitra. Ho fanampin'izany, lamba landihazo 100% no mahatonga azy ho afaka miaina bebe kokoa.
Raha mitady zavatra tsy maintsy ananana kalitao avo lenta azonao ampiasaina mandritra ny dia an-taonany maro ianao, fanaovana fanatanjahan-tena sns, dia tsy handiso fanantenana anao ny lamba avo lenta an'i Sweety Betty. Raha tianao ihany koa ireo loko mainty ao anaty fitafiana dia azo ampiasaina amin'ny manga-dranomasina.
Raha tsy miantsoantso hoe “mahafatifaty” ity dia tsy haiko hoe inona izany. Ity satroka ity dia tena hanaitra ny valin-kafanam-po avy amin'ireo mpankafy Insta anao sy ny BFF, ary ity satroka ity dia hanampy olona amin'ny akanjo rehetra. Ankoatr'izay dia manana mpanitsy habe an-kolaka izy io mba hahafahanao mizara izany amin'ny namanao (fampitandremana ara-drariny: hangataka aminao izy ireo mindrana an'io).
Mbola te hanana fijerena metaly kanto ao anaty teti-bola? Ity satroka siny ity dia ambany noho ny $ 20. Amin'ity vidiny ity dia tena mila ny volafotsy sy ny volamenany ianao. Ampiasao izy io mba hanampiana famirapiratana amin'ny jeans sy ny T-shirt anao, na ampifanaraho amin'ny akanjo mahafinaritra amin'ny alina ary mivoaha.
Tokony ho fantatrao fa misy mila an'io satroka siny alika kely io ho fanomezana. Eny, mety ho ianao ilay olona.